Th कुराहरु जुन तपाईले आफ्नो ईकॉमर्स वेबसाइट सुरु गर्नु भन्दा पहिले विचार गर्नु पर्छ Martech Zone
ईकमर्स वेबसाइट सुरू गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ? यहाँ पाँच कुरा छन् जुन तपाईले आफ्नो ecommerce वेबसाइट सुरू गर्नु अघि विचार गर्नु पर्छ:
1. सही छ उत्पादन
सहि उत्पादन खोज्दै एक ecommerce व्यापार को लागी काम भन्दा सजिलो छ। मानौं कि तपाईंले श्रोता खण्ड कम गर्नुभयो, तपाईं बेच्न चाहानुहुन्छ, के बेच्ने भन्ने अर्को प्रश्न उठ्छ। त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईंले उत्पादनको बारे निर्णय लिँदा जाँच गर्नुपर्दछ। तपाईंले यो सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंले बेच्नको लागि उत्पादको माग छ। बुझ्नुहोस् कि तपाइँ एक व्यापार चलाउन र पैसा कमाउन को लागी।
एक नयाँ उत्पादन वा प्रस्ताव बाहिर परीक्षण मात्र श्रम र समय खपत गर्दैन, तर यो पनि धेरै महँगो हुन सक्छ। केहि नयाँ कोशिस गर्नुको सट्टा, माग उत्पादन भएको र अपेक्षाकृत कम प्रतिस्पर्धी को आलामा एक उत्पादन पाउनुहोस्। यो गृहकार्य गर्न एक कामजस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले पछि लाभांश भुक्तान गर्दछ पछि जब तपाईंको ecommerce वेबसाइट परिपक्व हुन्छ।
2. बहु आपूर्तिकर्ता र शिपर्स छ
तपाईले बेच्न लाग्नु भएको उत्पादनलाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि तपाईले त्यसलाई कहाँबाट किन्नु पर्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। जब सम्म तपाईं आफ्नै उत्पादनलाई १००% आफैंमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै आपूर्तिकर्ताहरू समावेश बिना, तब तपाईं यो चरण छोड्न सक्नुहुनेछ। सबैको लागि, यहाँ के तपाईंले दिमागमा राख्न आवश्यक छ।
को एक महत्वपूर्ण हिस्सा विश्वको निर्माण एशियामा भइरहेको छ। यी देशहरूबाट कतै अमेरिकामा सोर्सि time गर्न समय लाग्नेछ। केवल यसले समय लिने छैन, तर यो एक समस्या पनि हुनेछ किनकि तपाईं आफ्नो आपूर्तिकर्ताबाट हजारौं माईल टाढा हुनुहुन्छ। यी परिदृश्यहरूमा, तपाईले निर्मातालाई समस्या वा अनिश्चितताको समयमा जानका लागि खोज्नु पर्छ।
आदर्श रूपमा तपाईसँग कुनै एकल उत्पादको लागि तीनदेखि चार निर्माणकर्ता बीचमा हुनु पर्छ। तपाईंले तिनीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सचेत गराउनुपर्दछ यदि तपाईं बिक्री वा अरू केही बढेको आशा गर्नुहुन्छ भने। एकचोटी तपाईले एक निर्माता फेला पार्न समाप्त गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो उत्पादन ढुवानी गर्ने बारे चिन्ता गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन्, र यो एक राम्रो निर्णय लिनु अघि तपाईंको उचित लगनशीलता गर्नु उत्तम हो।
3. रूपान्तरणको लागि तपाईंको ईकॉमर्स साइट अनुकूलन गर्नुहोस्
एक ईकामर्स व्यवसाय चलाउनको अधिक रचनात्मक पक्षमा प्रवेश गरौं। तपाईंको व्यवसायलाई सफल बनाउनको लागि तपाईंले बिक्री गर्नुपर्नेछ। बिक्री बनाउनु त्यति कम चुनौतीपूर्ण हुन्छ जब तपाईंको वेबसाइट त्रुटिपूर्ण रूपमा डिजाइन गरिएको हो र प्रयोगकर्ताको उद्देश्यले काम गर्दछ।
भाडा डिजाइनर र विकासकर्ताहरू जसले परिणाम-संचालित वेबसाइटहरू बनाउँदा प्रमाणित अनुभव गर्छन् यदि तपाईं आफ्नै साइट निर्माण गर्न विश्वस्त हुनुहुन्न भने। उनीहरूले च्याटबट्स, लाइभ च्याट अनुप्रयोग, वा पप-अपहरू जस्ता उपकरणहरू सुझाव दिन सक्छन् जसले बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ। थप रूपमा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि वेबसाइट महत्त्वपूर्ण बगहरूबाट मुक्त छ जुन तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूलाई बाधा पु .्याउन सक्छ जब उनीहरू लेनदेनको माध्यमबाट जाँदैछन्।
4. प्रभावी मार्केटिंगमा लगानी गर्नुहोस्।
यस विन्दूमा, तपाइँसँग तपाइँको ecommerce वेबसाइट छ र चलिरहेको छ, तर तपाइँ अझै पैसा कमाउँदै हुनुहुन्न। केही नगदी प्रवाह ल्याउन सुरू गर्न, तपाईंले उचित मार्केटिंग च्यानलहरूमा लगानी सुरू गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाईले छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। यदि तपाईं तत्काल फिर्ताको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं सामाजिक मिडिया विज्ञापनहरू, खोज ईन्जिन विज्ञापन, प्रभावकारी मार्केटि,, केही नाम दिन सक्नुहुन्छ।
धेरै व्यक्तिहरूको लागि तपाईले यी तीन विधिहरू सुरू गर्नु पर्दछ र तपाईको लागि रूपान्तरणले के ल्याउँदछ हेर्नुहोस्। त्यसो भए, जब तपाईं पैसा बनाउन शुरू गर्नुहुन्छ र प्रयोग गर्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईं लामो अवधिमा मार्केटिंग रणनीतिहरू जस्तै खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसनमा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।एसईओ), सामग्री मार्केटिंग, विज्ञापन, आदि।
5. चाँडै स्पष्ट नीतिहरू स्थापना गर्नुहोस्
भएको स्पष्ट नीतिहरू यो सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक छ कि तपाईंको ई-कॉमर्स वेबसाइटको दैनिक-दिनका अपरेशनहरू बिना कुनै हिचकीको बन्द हुन जान्छ। यी नीतिहरूले तपाइँको वेबसाइटको गोपनीयता नीति, फिर्ती नीति, HIPAA अनुपालन यदि तपाइँ योग्य छ, आदि समावेश गर्दछ।
यी मामिलाहरूमा पेशेवर भएको कसैसँग सम्पर्कमा रहनु उत्तम हुन्छ। जबकि तपाईलाई समस्यामा पर्ने सम्भावना पातलो हुनुपर्दछ, तिनीहरूलाई शून्य बनाउनुहोस् स्पष्ट, ठोस नीतिहरू तपाइँ र तपाइँको व्यवसायलाई बचाउन डिजाइन गरिएको हो।
एक सन्दर्भको रूपमा, तपाईं केहि अग्रणी ईकॉमर्स जायन्ट्स र तपाईंको आला मा अन्य प्रमुख प्रतिस्पर्धीहरु मा अवस्थित नीतिहरु मार्फत जान सक्नुहुन्छ।
स्विफ्टच्याट तपाइँ लाई प्रत्यक्ष कुराकानी संग छिटो आदर्श आगन्तुकहरु लाई पहिचान गर्न र उनीहरुलाई एक खरीद गर्न तिर चलाउन मद्दत गर्न सक्छ। ईकमर्स मा प्रत्यक्ष कुराकानी फोन समर्थन को तुलना मा ४००% कम महंगा हुन सक्छ, ३ देखि ५ गुना रूपान्तरण बढाउन सक्छ, कार्ट त्याग दर घटाउन, ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन, ग्राहक वफादारी बढाउन, र तपाइँको समर्थन कर्मचारी को उत्पादकत्व मा सुधार गर्न सक्छ।
स्विफ्टचटका लागि साइग्न अप
टैग: कुराकानीरूपान्तरण दर अनुकूलनक्रोडाटा धारणा नीतिहरूecommerce कुराकानीecommerce प्रक्षेपणecommerce मार्केटिंगईकमर्स शिपर्सecommerce आपूर्तिकर्तालन्चप्रत्यक्ष कुराकानीगोपनीयता नीतिउत्पादन मिक्सउत्पाद चयनउत्पाद आपूर्तिकर्ताफिर्ता नीतिहरूजहाजहरु
जुन 24, 2021 बिहान 4:57 बजे
सोशल मिडिया ईकमर्स मार्केटिंग एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो। यसले तपाइँलाई तपाइँको उद्योग, ग्राहकहरु, र बजार संग व्यक्तिगत, सार्वजनिक तरीका मा संचार गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं संलग्नता र अन्तरक्रिया उत्पन्न गर्न, तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिक बढाउन, र ग्राहकहरूको ठूलो आधार विकास गर्न सोशल मिडिया प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सोशल मिडिया मार्फत तपाइँको कम्पनीको ठोस टोन र व्यक्तित्व कायम राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने स्थिरता भनेको तपाइँको दर्शकहरूमा विश्वास सिर्जना गर्दछ।